ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လူကြီးများနှင့်အရွယ်ရောက်သူများအား Striatum ဖြစ်စဉ်များကကွဲပြားစွာဆုချသည် (၂၀၁၂) - Your Brain On Porn
Striatum လူကြီးများ (2012) သာရှိပြီးပြည်ပမှမြီးကောင်ပေါက်များတွင်ကွဲပြားခြားနားဆုလာဘ် process လုပ်တယ်
proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2012 ဇန်နဝါရီ 31; 109 (5): 1719-24 ။ EPub 2012 ဇန်နဝါရီ 17 ။
Sturman DA, Moghaddam B ကို.
အာရုံကြောသိပ္ပံ, ရှိကြောင်း Pittsburgh တက္ကသိုလ်မှရှိကြောင်း Pittsburgh, PA ဆိုပြီး 15260, အမေရိကန်နိုင်ငံစီးဌာန။
မြီးကောင်ပေါက်ကိုမကြာခဏထိုကဲ့သို့သောသက်တူရွယ်တူ interaction ကနှင့်ပျြောမှေ့စလှုံ့ဆော်မှုကဲ့သို့တူညီသောအဓိကလှုံ့ဆျောမှုအခင်းအကျင်းမှကွဲပြားခြားနားလူကြီးများထက်တုံ့ပြန်ကြသည်။ မြီးကောင်ပေါက်များ၏အာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့ကွဲပြားခြားနားမှု Delineating ဒီဖြစ်စဉ်အဖြစ်ထိုကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု, ခံစားချက်မမှန်ခြင်း, schizophrenia အဖြစ်အလေးအနက်အမူအကျင့်များနှင့်စိတ်ရောဂါအားနည်းချက်များ၏အခြေစိုက်စခန်းနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးသည်။ ကျနော်တို့အဓိကလှုံ့ဆော်မှု key ကိုဦးနှောက်ဒေသများတွင်လုပ်ငန်းများ၌နေသောနည်းလမ်းသည်အသက်-related အပြောင်းအလဲများကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ predilections နှင့်အားနည်းချက်များအခြေခံနိုင်ကြောင်းယုံကြည်ပါတယ်။ လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူအလယ်ပိုင်းပြဿနာကြောင့်ကြောင့်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု၏အသက်အရွယ်-related နှိုင်းယှဉ်စိတ်ခွန်အားနိုးအခင်းအကျင်းကာလအတွင်းဆောင်ရွက်စေခြင်းအရေးကြီးသည်။ ကျနော်တို့ကဆုလာဘ်-လှုံ့ဆော်ဆာတာဝန်စဉ်အတွင်းဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်၏ Single-ယူနစ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဒေသခံလယ်ပြင်အလားအလာအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် (NAc) နှင့် dorsal striatum (DS) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ဤရွေ့ကားဒေသများလှုံ့ဆော်မှုသင်ယူမှု, ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်အရေးယူရွေးချယ်ရေးအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်။ ကျနော်တို့ယေဘုယျအားဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့ထက်ပိုသင်ယူမှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေတဲ့ဒေသက, DS အတွက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုသတင်းပို့ပါ။ အထူးသမြီးကောင်ပေါက်ပေမယ့်မဟုတ်အရွယ်ရောက်, ဆုလာဘ်အတွက်မျှော် activated သော DS အတွက်အာရုံခံ၏ကြီးမားသောအချိုးအစားရှိခဲ့ပါတယ်။ ပိုများသောအလားတူတုန့်ပြန်မှုပုံစံများနှစ်ခုအသက်အရွယ်အုပ်စုများ၏ NAc အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ DS Single-ယူနစ်လှုပ်ရှားမှုကွဲပြားခြားနားမှုအလားတူဒေသခံလယ်ပြင်အလားအလာလှိုရှိနေသော်လည်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုကမြီးကောင်ပေါက်အတွက်ပြင်းထန်စွာသင်ယူမှုနှင့်အလေ့အထဖွဲ့စည်းရေးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဒေသဆုချဖို့အလွန်အမင်းတုံ့ပြန်မှုကြောင်းပြသသည်။ ဒါဟာအရှင်ဆုလာဘ်ကွဲပြားခြားနားဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူပုံဖော်နှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေပုံမမှန်၎င်းတို့၏တိုးလာအားနည်းချက်များဘို့မယ်ကိုဘယ်လိုများအတွက်ယန္တရားအကြံပြုထားသည်။
keywords: ဖွံ့ဖြိုးရေး, Basal ganglia, စွဲလမ်း, စိတ်ကျရောဂါ, electrophysiology
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း neurodevelopmental ပြောင်းလဲမှုများကိုတစ်များပြားလှ (ဖြစ်ပေါ်1) ထိုသို့သောအကြိုးလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်ဘယ်လိုအဓိကဖြစ်ရပ်များ, ကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါ, လုပ်ငန်းများ၌နေကြသည်။ ထိုသို့သောအာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့အပြောင်းအလဲများကဲ့သို့သောတိုးမြှင့်အန္တရာယ်-ယူပြီး (အဖြစ်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးစိတ်ကိုဖြတ်ပြီးမြီးကောင်ပေါက်တှငျတှေ့မွငျဘုံအပြုအမူ predilections, အချို့ကိုအခြေခံနိုင်1-5), အဖြစ်စွဲ, စိတ်ကျရောဂါနှင့် schizophrenia နဲ့တူပုံမမှန်ဖွံ့ဖြိုးဖို့တိုးမြှင့်လိုတဲ့သဘောထားကို (6-8) ။ ဒီအားနည်းချက်များ၏အာရုံကြောအလွှာနားလညျနိုငျခင်မှာကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ၏သူတို့နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်, ထိုဆယ်ကျော်သက်ရွယ်ဦးနှောက်၏ပုံမှန်အာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့ပုံစံများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။
အမှန်ကတော့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအမူအကျင့်များနှင့်စိတ်ရောဂါအားနည်းချက်စိတ်ခွန်အားနိုးအခင်းအကျင်းစဉ်အတွင်းသိသာသည်။ ဒါဟာလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူကာလအတွင်းအရွယ်ရောက်သူနဲ့မြီးကောင်ပေါက်များ၏အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုနှိုင်းယှဉ်ဖို့ထို့ကြောင့်အရေးကြီးပါသည်။ လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတစ်ခုသက်ရှိနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများအကြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးမျိုး (ဥပမာ, အများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုသို့မဟုတ်အထူးသဖြင့်ဆုလာဘ်မှနီးကပ်) တွင်တစ်ဦးညှိနှိုင်းမှုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ကြောင့်အရေးယူမှုဖြစ်ပါတယ် (9) ။ ထိုသို့သောအပြုအမူဆိုင်ရာအခြေအနေများသည်အာရုံကြောဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုသဘာဝရှုပ်ထွေးစေလိမ့်မည်။ အာရုံကြောကွဲပြားမှုသည်အသက်အုပ်စုနှစ်ခုအကြားအပြုအမူစွမ်းဆောင်ရည်ကွာခြားချက်ကိုသာရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မည်သို့သိရသနည်း။ အာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့ကွာခြားချက်ဟာအပြုအမူဆိုင်ရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုကြောင့်လား၊ ဒါမှမဟုတ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေရဲ့ encoding နဲ့ process လုပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေမှာအခြေခံကွဲပြားခြားနားမှုများရှိပါသလား။ အပြုအမူစွမ်းဆောင်ရည်သည်အုပ်စုနှစ်စုအကြား (ကွဲပြားခြားနားသောအပြုအမူဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်) (ဆယ်ကျော်သက်များနှောင်းပိုင်းကာလများတွင်ဆုလာဘ်ပြန်လည်ရယူခြင်းဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများကိုဆုချီးမြှင့်ခြင်း) ပြုလုပ်ချိန်တွင်ဆယ်ကျော်သက်များ၏အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုအားအရွယ်ရောက်သူများ၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန် vivo တစ်ခုတည်း electrophysiological မှတ်တမ်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤသို့ပြုရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိသောအသက်အရွယ်နှင့်သက်ဆိုင်သောအပြောင်းအလဲဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုများကိုခွဲခြားသိမြင်စေမည့်“ အပြုအမူဆိုင်ရာညှပ်” ကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။
အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်အများကြီးဒီလမ်းအတွက်လေ့လာထားရန်မရှိသေးပါသော်လည်း, ငါတို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူ၌မိမိတို့ဗဟိုအခန်းကဏ္ဍ၏ dorsal striatum (DS) နှင့်နျူကလိယ accumbens (NAc) အပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ အတူတူအဲဒီဦးနှောက်ဒေသများ (အသင်းအဖွဲ့သင်ယူမှု, အလေ့အထဖွဲ့စည်းခြင်း, ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာပုံစံများ၏သပ္ပါယ်ထိန်းချုပ်မှုပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်10-13) ။ အဆိုပါ striatum (အာရုံခံတွင်ပါဝင်ပတ်သက် cortical ဒေသများထံမှ Project, မော်တာနှင့်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များအားလက်ခံတွေ့ဆုံ14), အဖြစ် dopaminergic input ကို (15) ။ အဆိုပါ NAc, အ ventral striatum ရဲ့အစိတ်အပိုင်း, (ထို amygdala ကနေ afferents အားလက်ခံတွေ့ဆုံ16) နှင့် prefrontal cortex (17), နှင့် ventral tegmental ဧရိယာကနေ dopaminergic afferents (18) ။ အဆိုပါ NAc အရေးယူဖို့လှုံ့ဆျောမှု၏ဘာသာပြန်ချက်ဖို့အဓိကသော့ချက် (စဉ်းစားသည်19) နှင့်ရှာကြံဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေနှင့်အာရုံ၏ neurobiological ကျောထောက်နောက်ခံနှင့် ပတ်သက်. အချို့သောလက်ရှိယူဆချက်မှဗဟိုဖြစ်ပါတယ် (5, 20, 21).
အာရုံကြောယူနစ်လှုပ်ရှားမှုဟာ DS နှင့် NAc (ထံမှမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်သင်္ဘောသဖန်း။ S1) (ဆယ်ကျော်သက်များn = 16) နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ (n = 12) ကြွက်သူတို့တစ်တွေဆုလာဘ်ရလဒ်ကို (အစားအစာတောင့်နှင့်အတူတစ်ဦးဆာပအရေးယူဆောင်ရွက်မှု (Poke) ပေါင်းသင်းသင်ယူသကဲ့သို့, သဖန်းသီး။ 1A) ။ အမူအကျင့်ဒေတာ (ပေါင်းစပ်ပြသနေကြသည်သဖန်းသီး။ 1 B-D ကို), အဘယ်သူမျှမစာရင်းအင်းကွဲပြားခြားနားမှုဒေသများအကြားလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ အကြောင်းမူကား, session တစ်ခုနှုန်းစမ်းသပ်မှုတွေ၏နံပါတ်သင်တန်းကိုဖြတ်ပြီးအဘယ်သူမျှမသိသိသာသာအသက်အရွယ်-related ကွဲပြားခြားနားမှု [ရှိခဲ့သည်F(1, 1) = 1.74, P = 0.20]; အဆိုပါနျဆာပ Poke ဖို့ cue ထံမှအောင်းနေချိန် [F(1, 1) = 0.875, P = 0.36]; သို့မဟုတ်အောင်းနေချိန်ဟာဆာပ Poke ကနေအစားအစာကျင်းထဲသို့ entry ကိုမှ [F(1, 1) = 0.82, P = 0.36] ။ ဒီကစာရင်းအင်းသိသိသာသာမဟုတ်ခဲ့သော်လည်းအသင်းအဖွဲ့သင်ယူဘူးသောသုံးဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်တိရိစ္ဆာန်များအားဖြင့်မောင်းထုတ်ခဲ့သည်ပေမယ့်ဆာပ Poke မှ cue စတင်ခြင်းကနေအောင်းနေချိန် (အစောပိုင်းအစည်းအဝေးများအတွက်ကွဲပြားခြားနားဖြစ်ထငျရှားသဖန်းသီး။ 1C, Inset) ။ session တစ်ခုကနေ4မှစ. , ရှိသမျှအတိုင်းအတာနှစ်ဦးစလုံးအသက်အုပ်စုများအတွက်တည်ငြိမ်အများဆုံးရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဤအအစည်းအဝေးများစဉ်အတွင်းအစားအစာကျင်းသို့ entry ကိုဖို့နျဆာပတုံ့ပြန်မှုအနေဖြင့်ပျမ်းမျှအရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အောင်းနေချိန်အသီးသီး 2.47 ± 0.12 s နှင့် 2.54 ± 0.17 s ကို (± SEM ဆိုလို) ခံခဲ့ရသည်။
အမူအကျင့်တာဝန်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်။ (A) ကတာဝန်များထဲမှမြို့ရိုးပေါ်မှာသုံးတွင်းနဲ့အော်ပရေတာသေတ္တာနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်မြို့ရိုးပေါ်မှာတစ်အစားအစာကျင်းများတွင်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ တစ်ဦးအလင်းဗဟိုအပေါက် (Cue) တွင်ဖွင့်တဲ့အခါမှာစမ်းသပ်မှုစတင်ခဲ့သည်။ ကြွက်ကြောင့်အပေါက် (Poke) သို့ပွူလျှင်, ...
ကြွက် action ကို-ရလဒ်ကိုအသင်းအဖွဲ့သင်ယူနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ session တစ်ခုအတွက်မြောက်မြားစွာစမ်းသပ်မှုတွေဖျော်ဖြေအဖြစ်ဆာပ Poke နှင့်အစားအစာကျင်း entry ကိုလှည့်ပတ်အာရုံကြောလူဦးရေတုံ့ပြန်မှုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်တသမတ်တည်း DS (ဆိုလိုသည်မှာအစည်းအဝေးများ 4-6; သင်္ဘောသဖန်း။ S2A) ။ အစည်းအဝေးများ 4-6 ကာလအတွင်းကဒီလှုပ်ရှားမှုတစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာစာမေးပွဲအချို့အာရုံခံအုပ်စုများ၏လှုပ်ရှားမှုများအတွက်တူညီပေမယ့်အခြားသူတွေအတွက်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာကွဲပြားခြားနားမှု (ထုတ်ဖော်ပြသသဖန်းသီး။ 2) ။ မှတ်တမ်းတင်ထားသောအာရုံခံ၏အကြောင်း 10% (အနည်းငယ်ဆဲလ်ဘယျလိုမှမဖြစ်လာနှင့်တကွ, ရုံးတင်စစ်ဆေး-စတင်ခြင်း cue မှာ activated ခဲ့သည်သဖန်းသီး။2A နှင့် C, လက်ဝဲ) ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူပစ်ခတ်ရန်-မှုနှုန်း၏ဖြန့်ဝေ Z-scores (ဒီအချိန်မှာကွဲပြားခြားနားမဟုတ်ခဲ့Z = 1.066, P = 0.29; သဖန်းသီး။ 2B, လက်ဝဲ) ။ အဆိုပါ cue ရန်, activated inhibited နှင့် nonsignificant အာရုံခံ၏အချိုးအစားမအသက်အရွယ်-related ကွဲပြားခြားနားမှုχ [လည်းရှိခဲ့သည်2(2, n = 570) = 2.35, P = 0.31; စားပွဲတင် 1] ။ ထိုကဲ့သို့သောပြင်းအားတိုးမြီးကောင်ပေါက်အတွက် သာ. ကြီးမြတ်ခဲ့ကြပေမယ့် activated ဆဲလ်များနှင့်လှုပ်ရှားမှုဟာသူတို့ရဲ့ပြင်းအား၏အချိုးအစား (ပုနျဆာပတုံ့ပြန်မှုမပြုမီနှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများအတွက်တိုးလာZ = -2.41, P = 0.02; သဖန်းသီး။ 2B, အလယ်ဗဟို) ။ အဆိုပါနျဆာပ Poke ရှေ့တော်၌ထို 0.5 s ကိုစဉ်အတွင်းတုံ့ပြန်မှု-type အမျိုးအစားအချိုးအစားအတွက်ခေတ်-related ကွဲပြားခြားနားမှု [χသိသိသာသာခဲ့ကြသည်2(2, n = 570) = 10.01, P <0.01] အရွယ်ရောက်သူမှတားဆီးထားသောယူနစ်များပိုမိုကြီးမားသောအချိုးအစားကြောင့်မောင်းနှင်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှု (Z = 3.05, P <0.01; စားပွဲတင် 1) ။ ယခင်ကစေ့စပ်မဟုတ်ခဲ့အများအပြားယူနစ်ပြုသကဲ့သို့ချက်ချင်းဆာပတုံ့ပြန်မှုပြီးနောက်ယခင်က activated ခဲ့ဆဲလ် (ဘယျလိုမှဖြစ်လာခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 2A, အလယ်ဗဟို) ။ ဤသည်ကို (ဆာတုံ့ပြန်မှုပြီးနောက် 0.5 s ကိုစဉ်အတွင်းဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလှုပ်ရှားမှုအကြားဆက်လက်စာရင်းအင်းကွဲပြားမှုနှင့်အတူ, အသက်-တိကျတဲ့နှုန်းထားများမှာနောက်တဖန်တိုးမြှင့်ပေးသော, လူဦးရေလှုပ်ရှားမှုအတွင်းယာယီအောက်ဖက်တွန်းဦးဆောင်Z = 2.19, P = 0.03; သဖန်းသီး။ 2B, အလယ်ဗဟို) ။ ဤကာလအတွင်းတုံ့ပြန်မှုအမျိုးအစားများ၏အချိုးအစားကိုထပ်နှစ်ခု [χအကြားကွဲပြား2(2, n = 570) = 10.57, P <0.01], အရွယ်ရောက်ပြီးသူ - activated ယူနစ်၏ပိုကြီးတဲ့အချိုးအစားကြောင့် (Z = 2.87, P <0.01; သဖန်းသီး။ 2C, အလယ်ဗဟို နှင့် စားပွဲတင် 1) ။ အဆိုပါနျဆာပ Poke ယာယီဘယျလိုမှပြီးတော့အစားအစာကျင်းသို့ entry ကိုမပြုမီနောက်တဖန် activated ဖြစ်လာခဲ့သည်မတိုင်မီ (အပူကြံစည်မှုတန်းအတွက်အနီရောင်-ပြာအနီပုံစံကိုဖေါ်ပြခြင်းသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုးလာကြောင်းတူညီသောအာရုံခံ၏အတော်များများက သဖန်းသီး။ 2A, အလယ်ဗဟို) ။ ဒီပုံစံ၏အချိန်ကိုက်မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများအကြားကွဲပြားပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်တွင် neuron တစ်တွင်ရှိသောအချိုးအစားဆုလာဘ်သည်အထိ activated နျြရစျ။ ထိုသို့သော "ဆုလာဘ်-မျှော်လင့်အာရုံခံ" (အရွယ်ရောက်သူများတွင်ကျဲခဲ့ကြသဖန်းသီး။ 2A, မှန်သော) ။ အချိန်သင်တန်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုအပြင်, အစားအစာကျင်းသို့ entry ကိုရှေ့တော်၌ထို 0.5 ့အတွက် activated ကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်အာရုံခံလည်းပိုမိုမြင့်မားပြင်းအား (နဲ့အတူအထွတ်အထိပ်သို့Z = -7.63, P <0.01; သဖန်းသီး။ 2B, မှန်သော) ။ လှုပ်ရှားမှု၏ဤအလုံးစုံပုံစံအစည်းအဝေးများ 4-6 (လျှောက်လုံးအတော်လေးတည်ငြိမ်ခဲ့movie, S1), ယူနစ်တစ်ခုကျပန်းနမူနာအချို့ယူနစ်များအတွက်အတွင်း-ယူနစ်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြသပေမယ့် (သင်္ဘောသဖန်း။ S3) ။ activated နှင့်ဘယျလိုမှမယူနစ်များ၏အချိုးအစား [χကွဲပြား2(2, n = 570) = 41.18, P <0.01] အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်လူကြီးများနှင့်အတူအသီးသီးတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်မှုပမာဏများပြားသည်။Z = -6.21, P <0.01) နှင့်တားစီးယူနစ် (Z = 4.59, P <0.01; သဖန်းသီး။ 2C, မှန်သော နှင့် စားပွဲတင် 1) ။ အဆိုပါ 0.5 s ကိုအစားအစာကျင်းသို့ရောက်ရှိပြီးနောက်မှာတော့မြီးကောင်ပေါက် (အားကောင်းလှုပ်ရှားမှုပြဆက်လက်Z = -6.43, P <0.01) ။ သက်တောင့်သက်သာရှိမှု၊ ဟန့်တားနိုင်မှုနှင့်ထူးခြားမှုအချိုးအစားမှာအစားအစာကျင်းထဲသို့မဝင်မီချက်ချင်းပင်ကွဲပြားခြားနားခဲ့သည်။2(2, n = 570] = 31.18, P <0.01; သဖန်းသီး။ 2C, မှန်သော နှင့် စားပွဲတင် 1) ။ တနည်းကား, မြီးကောင်ပေါက် (activated ယူနစ်၏ပိုကြီးတဲ့အချိုးအစားရှိခဲ့ပါတယ်Z = -4.89, P <0.01) နှင့်ယခုအချိန်တွင်တားစီးယူနစ်၏သေးငယ်တဲ့အချိုးအစား (Z = 4.36, P <0.01) ။
DS ယူနစ်လှုပ်ရှားမှု။ (A) အပူကွက် (တစ်ဦးချင်းစီဆယ်ကျော်သက်များ၏ phasic Single-ယူနစ်လှုပ်ရှားမှုကိုယ်စားပြုn = 322) နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ (n = 248) အစည်းအဝေးများ 4-6 စဉ်အတွင်းယူနစ် (အတန်း), အချိန်တာဝန်ဖြစ်ရပ်များမှသော့ခတ်နှင့်နိမ့်ဆုံးကနေအမြင့်ဆုံးပျမ်းမျှအားပြင်းအားဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်။ အားလပ်ချိန် ...
ရွေးချယ်ထားသည့်အချိန်ပြတင်းပေါက်များတွင်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ DS နှင့် NAc ယူနစ်လှုပ်ရှားမှုနှိုင်းယှဉ်
အဆိုပါ NAc ခုနှစ်တွင်ပျမ်းမျှဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ spiking လှုပ်ရှားမှု ( ပို. တသမတ်တည်းပုံစံများမှအနည်းငယ်သို့မဟုတ် variable ကိုတာဝန်-related တုံ့ပြန်မှုထံမှထွက်သွားသင်္ဘောသဖန်း။ S2B) ။ session တစ်ခု4အသုံးပြုပုံနှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများအလားတူတိုးခဲ့ပါသည်ထို့နောက်ဆာပ Poke မှာ phasic လှုပ်ရှားမှုအတွင်းလျော့ကျသွားသည်။ ဒီပုံစံအထိဦးဆောင်နှင့်ဆုလာဘ် (အစားအစာကျင်း entry ကို) အောက်ပါပိုပြီးသိသာခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ NAc phasic အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုတစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာစာမေးပွဲအချို့ကွာခြားမှု (အတူအာရုံခံ activation နှင့်တားစီး၏ပုံစံနှင့်အတိုင်းအတာထဲမှာအများအပြားနီးစပ်တူညီထုတ်ဖော်ပြသသဖန်းသီး။ 3) ။ အထူးသဖြင့် cue အလင်းစတင်ခြင်းအနည်းငယ်အာရုံခံဘယျလိုမှမဖြစ်လာအတူဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများနှစ်ဦးစလုံးအတွက် NAc အာရုံခံ၏အကြောင်းကို 10% ၏ activation မှဦးဆောင်, ဤအချိန်တွင် activated သို့မဟုတ်ဘယျလိုမှမအာရုံခံ၏အချိုးအစားမသိသိသာသာအသက်အရွယ်-related ခြားနားချက် [ χ2(2, n = 349) = 1.51, P = 0.47] နှင့်ယေဘုယျလူဦးရေလှုပ်ရှားမှုမကွဲပြားမှု (Z = 1.82, P = 0.07; သဖန်းသီး။ 3, လက်ဝဲ) ။ အာရုံခံဆဲလ်များသည်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအတွက်တက်ကြွသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းတို့သည်တိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်ထဲသို့ဝင်သည့်အထိတက်ကြွနေလေ့ရှိသည်။ အဆိုပါယာယီဒိုင်းနမစ်အာရုံကြောအချို့အချိုးအစားဆာပုပ်နှင့်အစားအစာကျင်းဝင်နှစ် ဦး စလုံးပတ်ပတ်လည်ပိုမိုပြင်းပြင်းထန်ထန် activated ဖြစ်လာခဲ့သည်ထိုကဲ့သို့သောခဲ့ကြသည်။ လူ ဦး ရေလှုပ်ရှားမှုတွင်အသက်နှင့်ဆက်စပ်သောကွဲပြားခြားနားမှုမရှိပါZ = -0.16, P = 0.87) သို့မဟုတ်ယူနစ်အမျိုးအစားအချိုးအစား [χ2(2, n = 349) = 0.22, P = 0.90] က 0.5 ့ဆာပ Poke ရှေ့မှာရှိတဲ့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါနျဆာပ Poke ပြီးနောက်လူကြီးများ (ပိုမိုမြင့်မားပျမ်းမျှအားလှုပ်ရှားမှုပြသZ = 4.09, P <0.01) နှင့်ယူနစ်အမျိုးအစားအချိုးအစားအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု [χ2(2, n = 349) = 7.23, P ကြောင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ activated အာရုံခံ၏ကြီးမြတ်သောအချိုးအစားမှ = 0.03] (Z = 2.53, P = 0.01; သဖန်းသီး။ 3C, အလယ်ဗဟို နှင့် စားပွဲတင် 1) ။ အလားတူပင်ပိုမိုမြင့်မားပျမ်းမျှအားအရွယ်ရောက်လှုပ်ရှားမှု (အစားအစာကျင်း entry ကိုရှေ့တော်၌ထို 0.5 ့အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်Z = 2.67, P <0.01), တဖန်ကွဲပြားခြားနားသောယူနစ်အမျိုးအစားအချိုးအစား [observed လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်2(2, n = 349) = 6.64, P ကြောင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ activated ယူနစ်သိသိသာသာပိုကြီးတဲ့အချိုးအစားမှ = 0.04] (Z = 2.32, P = 0.02; သဖန်းသီး။ 3C, မှန်သော နှင့် စားပွဲတင် 1) ။ ဤကာလအတွင်းရုံးတင်စစ်ဆေး-by-ရုံးတင်စစ်ဆေးအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုနေဆဲသို့သော်လျော့နည်းဒါ DS (ထက်, တည်ငြိမ်မှုအချို့အတိုင်းအတာပြmovie, S2) ။ အစားအစာကျင်းသို့ entry ကိုနောကျ 0.5 ့အတွက်လူဦးရေလှုပ်ရှားမှုမရှိသိသာအသက်အရွယ်-related ခြားနားချက် (ရှိခဲ့သည်Z = -0.61, P = 0.54), ယူနစ်အချိုးအစားကွဲပြားခြားနားမှုပစ္စုပ္ပန်ခဲ့ကြသည်ပေမယ့် [χ2(2, n = 349) = 7.81, P = 0.02] ။ ဤသည် (ဒီအချိန်မှာဘယျလိုမှဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုယူနစ်တစ်ခုသိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ်အချိုးအစားရောင်ပြန်ဟပ်Z = -2.81, P <0.01; သဖန်းသီး။ 3C, မှန်သော နှင့် စားပွဲတင် 1) ။ ထို့ကြောင့်အုပ်စုများအကြားအချို့ကွဲပြားမှု, (ယူနစ်ဖြတ်ပြီးနှင့်လှုပ်ရှားမှု) အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုများ၏ယေဘုယျပုံစံရှိခဲ့သော်လည်း DS အတွက်ထက် NAc ပိုမိုဆင်တူခဲ့သည်။
NAc ယူနစ်လှုပ်ရှားမှု။ (A) အပူကွက် (ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုပြသn = 165; အထက်) နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ (n = 184; အနိမ့်အစည်းအဝေးများ 4-6 တစ်ခုချင်းစီအာရုံခံဆဲလျ၏) ပုံမှန်ပစ်ခတ်ရန်-မှုနှုန်းလှုပ်ရှားမှု, အချိန်ဖြစ်ရပ်များ Task မှသော့ခတ်။ (Bအားလုံးဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဖြတ်ပြီး) ပျမ်းမျှပုံမှန်ပစ်ခတ်ရန်-မှုနှုန်းလှုပ်ရှားမှု ...
ပျမ်းမျှပုံမှန် LFP spectrograms (ထို NAc နှင့် DS နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအတွက်အလားတူခဲ့ကြသည်သဖန်းသီး။ 4) ။ အစာစားခြင်းနိမ့်ကျခြင်းမတိုင်မှီ NAc တွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးများပါပြသခြင်းသည်β (13-30 Hz) နှင့်γ (> 30 Hz) bands များတွင်စွမ်းအားလျော့နည်းသွားသည်။ အစားအစာရွက်ထဲသို့ဝင်ပြီးနောက်အုပ်စုနှစ်ခုလုံးသည် 20 Hz ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိယာယီβ-power တိုးများမှုကိုပြသခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သော3(7-8 Hz) နှင့်α (12–500 Hz) ကဲ့သို့သောအနိမ့်ကြိမ်နှုန်းများတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် LFP ပါဝါပိုမိုမြင့်မားရန်အလားအလာရှိသည်။သဖန်းသီး။4A နှင့် B) ။ အလားတူပုံစံများ (ချက်ချင်းစားနပ်ရိက္ခာကျင်းသို့ entry ကိုအပြီးβ-တန်ခိုး၌အနည်းငယ်ပိုမိုအားကောင်းအရွယ်ရောက်တိုးနှင့်တကွ, DS တွင်တွေ့မြင်ခဲ့ကြသဖန်းသီး။4C နှင့် D) ။ ယေဘုယျအား, ထိုစာရင်းအင်းဆနျ့ကငျြဘမြေပုံ (သဖန်းသီး။4B နှင့် D) အများအပြားမှတ်ချက်ချခြွင်းချက်နှင့်အတူများစွာသောကြိမ်နှုန်းဖြတ်ပြီးမြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများ၏အကျိုးကို-related LFP လှုပ်ရှားမှုအတွင်းတူညီဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ NAc နှင့် DS အတွက်ဆုလာဘ်န်းကျင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ LFPs vs. ဆယ်ကျော်သက်ကလေး။ (A နှင့် C) ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် (အထက်) နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ (အနိမ့်NAc အတွက်ပုံမှန် LFP ပါဝါအတွက်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်လျှောက်လျော့နည်းညွှန်ပြ) spectrograms (လက်ဝဲ) နှင့် DS (မှန်သော) အချိန်သော့ခတ်အစားအစာကျင်းသို့ entry ကိုရန်။ ...
ကျနော်တို့အလေ့အထများ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အမူအကျင့်ပုံစံများ၏သပ္ပါယ်ထိန်းချုပ်မှု (ဆက်နွယ်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ, ထိုဆယ်ကျော်သက်ရွယ်မဟုတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ DS အတွက်ခိုင်မာတဲ့ဆုလာဘ်-related activation ကိုတွေ့11-13, 22) ။ အဆိုပါ NAc နှစ်ဦးစလုံးအသက်အုပ်စုများအတွက်အလားတူတုန့်ပြန်; အချို့သောယူနစ်လှုပ်ရှားမှုကွဲပြားခြားနားမှုအဆိုပါ NAc တွင်တွေ့မြင်ခဲ့ကြပေမယ့်အဲဒီကွဲပြားမှုသေးငယ်နှင့်ပိုပြီးယာယီ ရှိ. , အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု၏အချိန်သင်တန်းဤဒေသတွင်အုပ်စုများအကြားအလွန်အမင်းအလားတူဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် DS အတူမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း Basal ganglia အဆောက်အဦများ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ရင့်ကျက်အတွက်အပြောင်းအလဲနဲ့ဆုချခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောဒေသဆိုင်ရာသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောသရုပ်ပြတစ်တခါမျှအသက်အရွယ်-related အားနည်းချက်များတိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်မည်အကြောင်းဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့ခြားနားချက်များ locus သတိမမူအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ငါတို့သည်လည်းသိသိသာသာအသက်အရွယ်-related ကွဲပြားခြားနားမှုသည့်ယူနစ်အဆင့်မှာတှေ့မွငျရခဲ့ကြသည်ပေမယ့်, ထိုကဲ့သို့သောကွဲပြားမှု, LFP လှို၏တန်ခိုးအတွက်အလွယ်တကူ observable မဟုတ်ကြ fMRI နှင့် EEG (များ၏ပိုကြီး-စကေးဒေသဆိုင်ရာအချက်ပြမှုများကိုပိုမိုကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့နေသောတွေ့ရှိခဲ့23).
Phasic အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုဒေတာဆုလာဘ်မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း DS ၏တိကျသောအခန်းကဏ္ဍများသို့မဟုတ်ယင်း၏အာရုံကြောကိုယ်စားပြုအပေါ်ကြိုးလှုံ့ဆော်မှုများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု, မြီးကောင်ပေါက် vs. လူကြီးများအတွက်ကွဲပြားခြားနားကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများစမ်းသပ်မှုတွေရဲ့အစမှာ activated လာခဲ့တဲ့ယူနစ်ခဲ့ခေတ္တပုနျဆာပတုံ့ပြန်မှုမှာ inhibited, ပြီးတော့နောက်တဖန် activated ။ (ဤအနက်သည်အခြားလေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်း, အရွယ်ရောက်ပြီးသူယူနစ်အစောပိုင်းကပြန်လည်သက်ဝင်ခဲ့ပြီးဆုလာဘ်မတိုင်မီအခြေခံမှပြန်လာသော24, 25) ။ သူတို့ရဲ့ဆယ်ကျော်သက် counterparts တွေကိုများ၏ activation ဆန့်ကျင်ဘက်အတွက်ဆုလာဘ်ပြန်လည်ရယူခြင်း၏အချိန်မှလမ်းအားလုံးတည်မြဲမှု။ ထို့ကြောင့်သာမြီးကောင်ပေါက်အဆိုပါ DS အတွက်ဆုလာဘ်-မျှော်လင့်အာရုံခံအဖြစ်ဖော်ပြနိုင်သောအရာကိုတစ်ဦးသာရှိပြီးအုပ်စုတစ်စုရှိခဲ့ပါတယ်။ အခြားသူများကိုယခင်က (ထို DS အတွက် prereward လှုပ်ရှားမှုရှုလေ့လာခဲ့ကြပေမယ့်24-26), ဒီမှာအရေးပါအချက်သည်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများထိုကဲ့သို့သောလှုပ်ရှားမှုဟာသူတို့ရဲ့ပုံစံများအတွက်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားချိန်ခွင်လျှာနှင့်အချိန်သင်တန်းရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ striatum (အခွအေနေ-action ကိုအသင်းအဖွဲ့များအတွက်တိုက်ရိုက်အခန်းကဏ္ဍမှထင်နေသည်25) နှင့်ပိုပြီးအကျိုးရှိလုပ်ရပ်များဆီသို့အပြုအမူ biasing တစ်ခု "သရုပ်ဆောင်-ဝေဖန်ရေး" မော်ဒယ်အတွက်သရုပ်ဆောင်အဖြစ်အစေခံစေခြင်းငှါ (27) ။ အဆိုပါ striatum cortical ဒေသများထံမှ substantia nigra နှင့်အချိုမှုစီမံကိန်းများမှ dopamine input ကိုလက်ခံရရှိ; ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာပြန် cortex ဖို့ထပ်ခါတလဲလဲ, thalamus ဖို့ရာနောက်ထပ်စီမံကိန်းတွေ, globus pallidus မှဂါဘမြို့သားများပေးပို့သည်။ လက်ရှိ DS အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာအသက်-တိကျတဲ့ပုံစံများအဘို့အစိတျအပိုငျးအကောင့်တစ်ခုနု prefrontal cortex ကနေ Afferent အချက်ပြမှုများသို့မဟုတ် Basal ganglia ဒေသများနိုင်ဘူး။ အမှန်စင်စစ်ဤလုပ်ငန်းတာဝန်စဉ်အတွင်းဆယ်ကျော်သက် orbitofrontal cortex (OFC) တွင်လျှော့ချတားစီးနှင့်အဘို့ကိုတိုးမြှင် activation ယခင်ကလေ့လာတွေ့ရှိကြပါပြီ (28), ကိုတိုက်ရိုက် DS ၏ဤဒေသမှမှန်းချက်ရဲ့အရာ (29).
မိမိဆန္ဒအလျောက်အပြုအမူစဉ်အတွင်း DS အတွက်တိုးမြှင့် LFP θ-နှင့်β-လှိုယခင်အစီရင်ခံစာများနှင့်ကိုက်ညီ (30, 31), ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများနှစ်ဦးစလုံးအစားအသောက်ကျင်း entry ကိုမီနှင့်ပြီးနောက်ထိုအပြ။ အဆိုပါ DS အတွက်သိသိသာသာ Single-ယူနစ်လှုပ်ရှားမှုကွဲပြားခြားနားမှုနေသော်လည်း LFP လှိုအဆိုပါ DS နှင့် NAc နှစ်ဦးစလုံးအတွက်နှစ်ခုအသက်အရွယ်အုပ်စုများအကြားအလွန်အမင်းအလားတူခဲ့ကြသည်။ လူ့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလေ့လာမှုများထိုကဲ့သို့သော fMRI နှင့် EEG အဖြစ်ပိုကြီး-စကေးအလုပ်လုပ်တဲ့အစီအမံအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေသောကြောင့်ဤအတွေ့ရှိချက်အရေးကြီးသည်။ ကျနော်တို့ (ကြံ့ခိုင်အသက်အရွယ်-related ယူနစ်လှုပ်ရှားမှုကွဲပြားခြားနားမှုပိုကောင်း fMRI အချက်ပြမှုများနှင့်အတူပတျသကျရာပိုကြီး-စကေးဒေသဆိုင်ရာလှို, ဆင်တူလျှင်ပင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်ကြောင်းပြသ23) ။ Basal ganglia LFP လှိုများ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုမသိရှိပါသော်လည်း, သူတို့သည် (အမူအကျင့်အခြေအနေတွင်ခြင်းဖြင့် modulated နေကြတယ်30, 31), အရာနှစ်ခုအသက်အရွယ်အုပ်စုများအတွက်တူညီခဲ့သည်။
ပျမ်းမျှပုံမှန်လူဦးရေလှုပ်ရှားမှုအတွက်ထင်ဟပ်သကဲ့သို့ NAc ခုနှစ်, ဘေးဖယ်တချို့ယာယီကွဲပြားမှု, စုဆောင်း activated နှင့်ဘယျလိုမှမယူနစ်များ၏အချိုးအစား, သူတို့၏တုံ့ပြန်မှု၏အချိန်သင်တန်းကနေ, ယေဘုယျအားဖြင့်အလားတူခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ NAc ၏ခြယ်လှယ်လှုံ့ဆျောမှု, အခြေခံအပြုအမူလှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆာပအပြုအမူများသင်ယူမှုနှင့်သေဒဏ်စီရင် (အကျိုးသက်ရောက်စေ32-35) ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာတော့ NAc အတွက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအာရုံကြောဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကွဲပြားခြားနားမှု DS ရှိသူတို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ကျိုးနွံခြင်းနှင့်ယာယီခဲ့ကြသည်။ လူသားတွေအတွက် fMRI လေ့လာမှုများမြီးကောင်ပေါက် vs. လူကြီးများအတွက်ဆုလာဘ်-related NAc လှုပ်ရှားမှုနှိုင်းယှဉ်အတွက်ကိုက်ညီမှုခဲ့ကြပြီ။ အချို့လေ့လာမှုများ (ဆုချဖို့အားကောင်း NAc ဆယ်ကျော်သက်အချက်ပြမှုများကိုပြသကြ36, 37) နှင့်အခြားသူများကို (အားနည်းသောသူတို့ကိုမတွေ့ပြီ38) သို့မဟုတ်ပိုမိုရှုပ်ထွေးအခြေအနေတွင်-မှီခိုပုံစံများ (39) ။ နိုး-ပြုမူမြီးကောင်ပေါက်အတွက် subcortical Single-ယူနစ်နှင့် LFP လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းတင်သောဤလေ့လာမှု, ဤပြဿနာအပေါ်အလင်းတှရေဲ့အဓိပ်ပာ: ငါတို့သည်ထိုကဲ့သို့သောအသက်အရွယ်-related ကွဲပြားခြားနားမှုတိုင်းတာ signal ကိုအမျိုးအစားအပေါ်မူတည်နိုင်သည်ကိုသရုပ်ပြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်လည်းအလုပ်လုပ်တဲ့ရင့်ကျက်အဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသော OFC တူသောအခြားသောဒေသများထက် NAc အတွက်ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းယခင်သက်သေအထောက်အထား (နှင့်ကိုက်ညီများမှာ37, 28) ။ သို့သော်ဆယ်ကျော်သက် DS ယူနစ်လှုပ်ရှားမှုဟာအရွယ်ရောက်ပြီးသူ၏ထံမှမတူကြောင်းရှာဖွေတာအတွက်ကျနော်တို့က (အဆိုပြုပြီးပါပြီအတိုင်းဤရိုးရိုး subcortical ဂုဏ်ထူး vs. တစ် cortical မဟုတ်ကြောင်းကောက်ချက်ချ40).
ဒါဟာလက်ရှိလေ့လာမှုအတွက်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုကွဲပြားခြားနားမှုတိုင်းတာမူအကျင့်ကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ခုမရှိခြင်းကြားမှရှုလေ့လာခဲ့ underscore ရန်အရေးကြီးပါသည်။ သောကြောင့်အမူအကျင့်ပုံစံများ၏ကွပ်မျက်အတွက် DS ၏အခန်းကဏ္ဍကို၏, အာရုံကြောကွဲပြားခြားနားမှု unmeasured အပြုအမူခြားနားချက်မှအစိတ်အပိုင်းအတွက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားမှုအမြဲဖြစ်နိုင်သမျှတွေဟာသော်လည်းပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာသူတို့တစ်တွေအနည်းငယ်အကြောင်းပြချက်များအတွက်အလွန်အမင်းမဖြစ်နိုင်ပုံရသည်။ အာရုံကြောနှိုင်းယှဉ်ကြွက်တာဝန်နှင့်အတူမြင့်မားတတ်ကျွမ်းခဲ့ကြပြီးအလွန်တာဝန်အာရုံစူးစိုက်ဖြစ်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်တဲ့အခါမှသာလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဒီအပြုအမူ၏ပျမ်းမျှအောင်းနေချိန်နှစ်ခုအသက်အရွယ်အုပ်စုများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တူညီခဲ့သော်လည်းအကြီးမြတ်ဆုံးအာရုံကြောကွဲပြားခြားနားမှုများ၏ကာလ, အဆာပတုံ့ပြန်မှုများနှင့်စားနပ်ရိက္ခာကျင်းသို့ entry ကိုကြားအချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်အာရုံကြောကွဲပြားခြားနားမှုတသမတ်တည်း (ဆုလာဘ်မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်းဥပမာ) အချို့သောအရပ်တွင်လေ့လာတွေ့ရှိသော်လည်းမအခြားသူတွေကို (ရုံးတင်စစ်ဆေး-စတင်ခြင်း cue ဖို့ဥပမာတုံ့ပြန်မှု), နှင့်အာရုံခံ activation ၏အချိန်သင်တန်းမကြာခဏသိသိသာသာအာရုံခံတားစီး၏အချိန်သင်တန်းကွဲပြားသော်လည်းခဲ့ကြသည် တစ်ဦးချင်းစီအသက်အရွယ်အုပ်စုနှစ်ဦးစလုံးဦးနှောက်ဒေသများတွင်ယေဘုယျအားဖြင့်အလားတူဖြစ်ခဲ့သည်။ အတူတကွဤတွေ့ရှိချက်အခြေခံအသက်အရွယ်-related အာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုအာရုံကြောဗိသုကာ, အပြောင်းအလဲနဲ့ထိရောက်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်အဓိက၏ဇီဝကမ္မသက်ရောက်မှုများတွင်ကွဲပြားမှုမှပြောသောအရာပင်အလားတူအပြုအမူ / အခင်းအကျင်းစဉ်အတွင်းအထူးသဖြင့် DS အတွက်တည်ရှိသောအနက်နှင့်ကိုက်ညီများမှာ ဖြစ်ရပ်များ။
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ကျွန်တော်ဆုလာဘ်-related အဓိကဖြစ်ရပ်များပြင်းပြင်းထန်ထန်အသက်အရွယ်-related အမူအကျင့်များနှင့်စိတ်ရောဂါအားနည်းချက်များတာဝန်ရှိသည်ကွန်ရက်များအတွင်းအသစ်တခု locus ညွှန်ပြနိုင်သည့်မြီးကောင်ပေါက်သော်လည်းမလူကြီးများ၏ DS သို့အသာပုတ်ပါတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည် Basal ganglia ဖွဲ့စည်းပုံမှာ (ပုံမှန်သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်, အလေ့အထဖွဲ့စည်းရေးနှင့်လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူ၏အခြားရှုထောင့်တစ်ဦးအလယ်ပိုင်းအခန်းကဏ္ဍနှင့်၎င်း၏ကမောက်ကမဖြစ်မှုစိတ်ရောဂါပြဿနာများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်41-43) ။ ထို့ကြောင့်ဤဒေသ၏လှုပ်ရှားမှုသည်အခြား key ကိုဦးနှောက်ဒေသများနှင့်အတူ၎င်း၏အပြန်အလှန်အတူဖှံ့ဖွိုးတိုးတဆင့်ပြောင်းလဲပုံကိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူ, ဆယ်ကျော်သက်အားနည်းချက်များ၏ယန္တယားများနှင့်လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ချက်၏အနာဂတ်ဒီဇိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥာဏ်အရေးပါဖြစ်လိမ့်မည်။ ဆယ်ကျော်သက်အမူအကျင့်များနှင့်စိတ်ရောဂါအားနည်းချက်များ၏ရှုပ်ထွေးအများအပြားဟာဦးနှောက်ဒေသများတွင်ပါဝင်သော, ဖွယ်ရှိ multifactorial ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် DS တစ်ဦးတည်းသာကြောင်းအတူတူ (နှင့်မရအထီးကျန်အတွက်) အများကြီးအပြန်အလှန်ဒေသမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရဲ့အမူအကျင့်များနှင့်စိတ်ရောဂါအားနည်းချက်များဖွယ်ရှိဝေဖန်နေကြသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ် electrophysiological မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းအတွက်အသက်အရွယ်-related အာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုလေ့လာနေဖို့အမူအကျင့်ညှပ်ချဉ်းကပ်တူသောနည်းစနစ်တွေနဲ့ကျနော်တို့ကွန်ယက်အဆင့်မှာဆယ်ကျော်သက်အားနည်းချက်များ၏အလွှာတန်ဖိုးထားရန်စတင်နိုင်သည်ကိုငါတို့မြော်လင့်သည်။
တိရိစ္ဆာန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ Pittsburgh တက္ကသိုလ်မှတိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီး (postnatal နေ့က 70-90, n = 12) နှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရေကာတာ (သန္ဓေသားနေ့က 16; n Chow နှင့်ရေမှ4pm တွင်), နှင့်ကြော်ငြာ libitum access ကို: = 12) Sprague-Dawley ကြွက် (Harlan) 7-ဇအလင်း / မှောင်မိုက်သံသရာ (00 မှာပေါ်ထွန်းနှင့်အတူရာသီဥတုထိန်းချုပ်ထားသော vivaria ၌ကျိန်းဝပ်ခဲ့ကြသည်။ အမှိုက်သရိုက်များပြီးတော့ postnatal နေ့က 21 အပေါ်နို့ခဲ့ပြီးသောပိုမခြောက်လထက်အထီးခွေးများ, (မှရယူထားတာခံခဲ့ရn = 16) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူခွဲစိတ်အိုးအိမ်မှလေ့၏ 1 ရက်သတ္တပတ်၏အနိမ့်ဆုံးအပြီးဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ ဆယ်ကျော်သက်ခွဲစိတ် postnatal နေ့က 28-30 မှာဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ ရှစ်ဝါယာကြိုး microelectrode Array ကို (NAc သို့မဟုတ် DS ထဲထညျ့ခဲ့သညျSI ပစ္စည်းများနှင့်နည်းလမ်းများ) ။ ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ Record (ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်28) ကြွက်တစ်ဦးအမူအကျင့်တာဝန်ဖျော်ဖြေနေစဉ်။ လူပျိုယူနစ် (လက်စွဲစာအုပ်နှင့် semiautomatic စုစည်းခြင်းနည်းစနစ်ပေါင်းစပ်မှတဆင့်အော့ဖ်လိုင်းဖြင့် Sorter (Plexon) ကို အသုံးပြု. အထီးကျန်ခဲ့ကြ44).
ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့အမူအကျင့်စမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (ကောက်ယူခဲ့သည်28, 45) ။ ကြွက် (အစားအစာတောင့်ဆုလာဘ်တစ်ခုနျဆာပ Poke ဖျော်ဖြေဖို့သင်ယူသဖန်းသီး။ 1A နှင့် SI ပစ္စည်းများနှင့်နည်းလမ်းများ) ။ တစ်ဦးချင်းစီ session တစ်ခုမှာတောင့်ပြန်လည်ရယူခြင်းဖို့နျဆာပတုံ့ပြန်မှုအနေဖြင့်စမ်းသပ်မှုတွေ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်က, အဆာပတုံ့ပြန်မှုမှရုံးတင်စစ်ဆေး-စတင်ခြင်း cue ထံမှပျမ်းမျှအောင်းနေချိန်, နှင့်အောင်းနေချိန်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ session ကိုထပ်ခါတလဲလဲ-အစီအမံ×အသက်အရွယ် ANOVAs လုံး၏ယူဆချက်ကိုချိုးဖောက်ရာနိမ့်-ခညျြနှောငျ DF ပြင်ဆင်ချက်နှင့်အတူဤအစီအမံများ (α = 0.05) ၏အားလုံးအပေါ် SPSS software ကိုသုံးပြီးဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။
Electrophysiological အချက်အလက်များကို Chronux Toolbox ကနေလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်အတူထုံးစံ-တိကျမ်းစာ၌လာသည် Matlab (MathWorks) script များ (သုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်http://chronux.org/) ။ single-ယူနစ်တာဝန်ဖြစ်ရပ်များန်းကျင်ပြတင်းပေါက်အတွက်အနီးအနားဖြစ်ရပ်အချိန်ပစ်ခတ်ရန်-rate ကို Histogram အပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ကြသည်လေ့လာဆန်းစစ်။ single-ယူနစ်လှုပ်ရှားမှုခဲ့သည် Z-score သည့်အခြေခံကာလ (cue ကာလမတိုင်မီက2s ကိုစတငျတဲ့ 3-s ကိုပြတင်းပေါက်) စဉ်အတွင်းယုတ်များနှင့်တစ်ဦးချင်းစီယူနစ်၏ SD ကပစ်ခတ်ရန်နှုန်းထားများအပေါ် အခြေခံ. ပုံမှန်။ ပျမ်းမျှလူဦးရေယူနစ်လှုပ်ရှားမှုတာဝန်ဖြစ်ရပ်များန်းကျင်ကြံစည်ခဲ့သည်။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူယူနစ်လှုပ်ရှားမှု၏စာရင်းအင်းနှိုင်းယှဉ် (မတိုင်မီနှင့်ဆာပ Poke ပြီးမှ, ခင်နဲ့အစားအစာကျင်းသို့ entry ကိုနောက်, cue ပြီးနောက် 0.5-s ကိုပြတင်းပေါက်) အကျိုးစီးပွားတစ်ဦးဦးအချိန်ပြတင်းပေါက်အပေါ်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည် Wilcoxon ရာထူး-sum စမ်းသပ်မှုသုံးပြီး ( အဖြစ်တင်ဆက် Z-values), Bonferroni မျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်ဘို့အတညျ့။ အဆိုပါတရားမဝင်သောအယူအဆသည့်အခါဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်ပယ်ချခံခဲ့ရ P 0.01 ။ movies S1 နှင့် S2 အစည်းအဝေးများ 4-6 ကာလအတွင်းဗီဒီယိုကိုဘောင်မှတဆင့် Single-ရုံးတင်စစ်ဆေးခြေလှမ်းများအတွက်ရွေ့လျားငါးခုစမ်းသပ်မှုတွေကိုဖြတ်ပြီးဒေသအလိုက်ခန့်မှန်းပန်းခင်းလမ်း scatterplot (LOESS) ပျမ်းမျှအားဖြင့်ပုံမှန်ပစ်ခတ်ရန်-နှုန်းမှာလှုပ်ရှားမှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဗီဒီယိုကိုအချိန်အသီးအသီး session ရဲ့စမ်းသပ်မှုတွေမှတဆင့်လှုပ်ရှားမှု၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ အထူးသဖြင့်အချိန်ပြတင်းပေါက်အတွက် activated သို့မဟုတ် inhibited အဖြစ်သူတို့နှင့်အတူသုံးနှစ်ဆက်တိုက် 50-ms bins ပါရှိသောလျှင်ယူနစ်ကိုလည်းခွဲခြားခဲ့သည် Z ≥2သို့မဟုတ် Z အသီးသီး≤ -2 ။ ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ nonparametric bootstrap ကနေတဆင့်နိမ့်အယူမှား-အမျိုးအစားနှုန်းထားများအလျှော့ပေးလိုက်လျောလေ့လာဆန်းစစ်အဖြစ်ဤရွေ့ကားစံ (အတည်ပြုခဲ့ကြသည်39()SI ပစ္စည်းများနှင့်နည်းလမ်းများ) ။ ယူနစ်, χခွဲခြားခဲ့ကြသည်ပြီးတာနဲ့2 ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအားလုံး activated, တားစီးနှင့် nonsignificant ယူနစ်များအတွက်အကျိုးစီးပွားတစ်ဦးပြတင်းပေါက်အပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ သာသိသာχ2 စမ်းသပ်မှု post ကို hoc အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည် Zနောက်ခံသိသိသာသာအမျိုးအစားကွဲပြားမှုဆုံးဖြတ်ရန်နှစ်ခုအချိုးအစားအဘို့အ -tests ။ အဆိုပါတရားမဝင်သောအယူအဆတဲ့အခါမှာပယ်ချခံခဲ့ရ P <0.05, အတွက်ညွှန်ပြ စားပွဲတင် 1 ရဲရင့်အမျိုးအစားနှင့်အတူ။ ယူနစ်စုဆောင်းမှု (ဆိုလိုသည်မှာ activated သို့မဟုတ်ဘယျလိုမှမကဲ့သို့) ၏အချိန်သင်တန်းမြင်ယောင်စေရန်, အမျိုးအစားဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ရပ်များ Task မှပိုကြီးတဲ့ပြတင်းပေါက်အချိန်သော့ခတ်အတွက် (500-ms ခြေလှမ်းများအတွက်) ပြတင်းပေါက်များရွေ့လျား 250-ms တွင်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါကုန်ကြမ်း LFP ဗို့အားသဲလွန်စအပိုငျးအစဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင် (ထိုအတောအတွင်းဗို့ကနေ±3SD) clipping ပါရှိသောရသောစမ်းသပ်မှုတွေကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်စမ်းသပ်-ပျမ်းမျှပါဝါဖြာထွက်ရောင်ခြည်အလင်းတန်းများအသွင်ပြောင်းအစာရှောင်ခြင်း Fourier သုံးပြီးတစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအတွက်တွက်ချက်ခဲ့ကြသည် (SI ပစ္စည်းများနှင့်နည်းလမ်းများ) ။ ပါဝါကိုဖြာထွက်ရောင်ခြည်အလင်းတန်းများတစ်ဦးချင်းစီအသက်အရွယ်အုပ်စုပျမ်းမျှခဲ့ကြသည်။ Tအကြိမ်ရေဘင်×တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်များအတွက်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ spectrograms ၏ပုံမှန် LFP ပါဝါနှိုင်းယှဉ် -score ဆနျ့ကငျြဘမြေပုံအသက်အရွယ်-related တူညီနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန်ကြံစည်ခဲ့ကြသည်။
ဒီအလုပျအတှကျပံ့ပိုးမှုစိတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသားအင်စတီကျု, ထိုရှိကြောင်း Pittsburgh ဘဝကသိပ္ပံဖန်လုံအိမ်, နှင့် (Das ရန်) တစ်ဦးအင်ဒရူး Mellon ဖောင်ဒေးရှင်းမှ Predoctoral Fellowship တို့ကထောက်ပံ့ပေးခဲ့ရသည်။
1. လှံကို LP ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်အသက်အရွယ်-related အပြုအမူသရုပ်။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2000;24: 417-463 ။ [PubMed]
2. Adriani W က, Chiarotti က F, Laviola G. အဓာတ်လှေကားအသစ်အဆန်းရှာခြင်းနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ periadolescent ကြွက်များတွင်ပိုင်ထိုက်သောဃ-စိတ်ကြွဆေးာင်း။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1998;112: 1152-1166 ။ [PubMed]
3. Stansfield KH, Kirstein CL ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်အပြုအမူအပေါ်အသစ်အဆန်း၏ဆိုးကျိုးများ။ dev Psychobiol ။ 2006;48: 10-15 ။ [PubMed]
4. Stansfield KH, Philpot RM, Kirstein CL ။ အာရုံခံစားမှုရှာ၏တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်: အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ကြွက်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2004;1021: 453-458 ။ [PubMed]
5. ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပေါ် Steinberg L. တစ်ဦးကလူမှုရေးမှ neuroscience ရှုထောင့်။ dev ဗျာ 2008;28: 78-106 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
6. pause T က, Keshavan M က, Giedd ဖြစ်မှု။ အဘယ်ကြောင့်အများအပြားစိတ်ရောဂါမမှန်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းပေါ်ထွက်လာသလဲ? နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2008;9: 947-957 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
7. ထင်းရှူး DS ။ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်စိတ်ဓါတ်များမမှန်စတင်ခြင်း။ seminal Clin Neuropsychiatry ။ 2002;7: 223-233 ။ [PubMed]
8. လှံကို LP ။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ နယူးယောက်: က Norton; 2010 ။
9. Salamone JD, အားဖြည့်များ၏ကော်ရဲရားအမ်လှုံ့ဆျောမှုအမြင်များ: နျူကလိယ၏အမူအကျင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနားလည်သဘောပေါက်ဘို့အကျိုးသက်ရောက်မှု dopamine accumbens ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2002;137: 3-25 ။ [PubMed]
10 ။ က MS, Kubota Y ကို, Connolly CI, Hillegaart V ကို, Graybiel လေးပြေးရတာ။ အလေ့အထများ၏အာရုံကြောကိုယ်စားပြုတည်ဆောက်ခြင်း။ သိပ္ပံ။ 1999;286: 1745-1749 ။ [PubMed]
11 ။ Graybiel လေး။ အဆိုပါ Basal ganglia: အသစ်အလှည့်ကွက်သင်ယူခြင်းနှင့်မေတ္တာရှင်။ Curr Opin Neurobiol ။ 2005;15: 638-644 ။ [PubMed]
12 ။ Packard တို့ MG, Knowlton BJ ။ အဆိုပါ Basal ganglia ၏သင်ယူခြင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို။ Annu ဗြာ neuroscience ။ 2002;25: 563-593 ။ [PubMed]
13 ။ ယဉ်နာရီ, Ostlund SB, Balleine BW ။ ဆုလာဘ်-guided နျူကလီးယပ်အတွက် dopamine ကျော်လွန်သင်ယူခြင်း accumbens: cortico-Basal ganglia ကွန်ရက်များ၏သမာဓိလုပ်ဆောင်ချက်များကို။ EUR J ကို neuroscience ။ 2008;28: 1437-1448 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
14 ။ Voorn P ကို, Vanderschuren LJMJ, Groenewegen HJ, Robbins TW, Pennartz CMA ။ အဆိုပါ striatum ရဲ့ dorsal-ventral သွေးခွဲပေါ်မှာလှည့်ဖျားချပြီး။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2004;27: 468-474 ။ [PubMed]
15 ။ ကော့စတာ RM ။ အရေးပေါ်လေ့လာမှုအတွက်ပလပ်စတစ် corticostriatal ဆားကစ် - dopamine သည်၎င်းနှင့်မည်သို့ပတ်သက်သနည်း။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2007;1104: 172-191 ။ [PubMed]
16 ။ ကယ်လီ AE, Domesick vB, Nauta WJ ။ ကြွက်-တစ်ခု anterograde နှင့် retrograde သဲလွန်စနည်းလမ်းများအားဖြင့်ခန္ဓာဗေဒလေ့လာမှုအတွက် amygdalostriatal စီမံကိန်းများ။ neuroscience ။ 1982;7: 615-630 ။ [PubMed]
17 ။ Powell EW, Leman RB ။ နျူကလီးယပ် accumbens ၏ connections ။ ဦးနှောက် Res ။ 1976;105: 389-403 ။ [PubMed]
18 ။ Moore က RY, Koziell DA, Kiegler ခ Mesocortical dopamine စီမံချက်များ: အဆိုပါ septal innervation ။ ဖြတ်ကျော် Am Neurol Assoc ။ 1976;101: 20-23 ။ [PubMed]
19 ။ Mogenson GJ, ဂျုံးစ် DL, Yim CY ။ အဆိုပါ limbic စနစ်နှင့်ယင်းမော်တာစနစ်ကအကြား Functional interface ကို: လှုံ့ဆျောမှုကနေအရေးယူရန်။ prog Neurobiol ။ 1980;14: 69-97 ။ [PubMed]
20 ။ Ernst M က, ထင်းရူး DS, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လှုံ့ဆော်အပြုအမူများ၏ neurobiology ၏ Hardin အမ် Triadic မော်ဒယ်။ Psychol Med ။ 2006;36: 299-312 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
21 ။ ကာဇီ BJ, Getz S ကိုသွပ်ရည်စိမ်အေအဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်။ dev ဗျာ 2008;28: 62-77 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
22 ။ Graybiel လေး။ အလေ့အထများ, ထုံးတမ်းတို့နှင့်အကဲဖြတ်ဦးနှောက်။ Annu ဗြာ neuroscience ။ 2008;31: 359-387 ။ [PubMed]
23 ။ Logothetis NK ။ ထိုအသွေး-အောက်စီဂျင်-Level-မှီခိုအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် signal ကို၏အာရုံကြောအခြေခံ။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2002;357: 1003-1037 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
24 ။ Kimchi EY, Torregrossa MM, တေလာ JR, Laubach အမ်အာရုံခံအဆိုပါ dorsal striatum အတွက်နျဆာပသင်ယူမှု၏ဆက်နွယ်နေပါသည်။ J ကို Neurophysiol ။ 2009;102: 475-489 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
25 ။ ဗန် der Meer MA, ဂျွန်ဆင်တစ်ဦးက, Schmitzer-Torbert NC, Redish အေဒီ။ dorsal striatum, ventral striatum နှင့်သင်ယူ Spatial ဆုံးဖြတ်ချက်တာဝန်အပေါ် hippocampus အတွက်သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့၏သုံးဆ dissociation ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2010;67: 25-32 ။ [PubMed]
26 ။ Schultz W က, Tremblay L ကို, Hollerman JR ။ မျောက် orbitofrontal cortex နဲ့ Basal ganglia အတွက်အပြောင်းအလဲနဲ့ဆုချ။ Cereb Cortex ။ 2000;10: 272-284 ။ [PubMed]
27 ။ O'Doherty J ကို, et al ။ ဆာပအေးစက်အတွက် ventral နှင့် dorsal striatum ၏ Dissociable အခန်းကဏ္။ ။ သိပ္ပံ။ 2004;304: 452-454 ။ [PubMed]
28 ။ Sturman DA, Moghaddam ခလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူစဉ်အတွင်းဆယ်ကျော်သက် prefrontal cortex ၏အာရုံခံတားစီးနှင့်ညှိနှိုင်းလျှော့ချ။ J ကို neuroscience ။ 2011;31: 1471-1478 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
29 ။ Schilman EA ၏, Uylings HB, Galis-de Graaf Y ကို, ယောလ: D, Groenewegen HJ ။ ကြွက်များတွင်အဆိုပါ Orbital cortex မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ဟာ caudate-putamen ရှုပ်ထွေးသော၏ဗဟိုအစိတ်အပိုင်းမှမှန်းချက်ရဲ့။ neuroscience လက်တ။ 2008;432: 40-45 ။ [PubMed]
30 ။ Courtemanche R ကို, Fujii N ကို, Graybiel လေး။ synchronous, focal modulated beta ကို-band လှိုနိုးပြုမူနေမျောက်များ၏ striatum အတွက်ဒေသခံလယ်ပြင်အလားအလာလှုပ်ရှားမှုသွင်ပြင်လက္ခဏာများဖြစ်ကြသည်။ J ကို neuroscience ။ 2003;23: 11741-11752 ။ [PubMed]
31 ။ DeCoteau WE, et al ။ အလိုအလျောက်နှင့်ညွှန်ကြားအပြုအမူတွေစဉ်အတွင်းကြွက် dorsal striatum အတွက်ဒေသခံလယ်ပြင်အလားအလာ၏လှို။ J ကို Neurophysiol ။ 2007;97: 3800-3805 ။ [PubMed]
32 ။ နေ့ JJ, ဂျုံးစ် JL, Carelli RM ။ နျူကလိယတွင် neuron ကြွက်များတွင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ဖြစ်ပွားနေသောဆုလာဘ်ကုန်ကျစရိတ်ဝှက် accumbens ။ EUR J ကို neuroscience ။ 2011;33: 308-321 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
33 ။ Corbit LH, muir JL, Balleine BW ။ ယင်းနျူကလိယ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဆာအေးစက်အတွက် accumbens: accumbens core နဲ့ shell ကိုအကြားတစ်ဦး functional dissociation ၏သာဓက။ J ကို neuroscience ။ 2001;21: 3251-3260 ။ [PubMed]
34 ။ ဆပ်သာလန် RJ, Rodriguez AJ ။ အဆိုပါ fornix / fimbria နှင့်နေရာသင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာတချို့ဆက်စပ် subcortical အဆောက်အဦများ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 1989;32: 265-277 ။ [PubMed]
35 ။ Ploeger GE, Spruijt BM, Cool AR ။ ကြွက်များတွင်မောရစ်ရေဝင်္အတွက် Spatial မူပြောင်းခြင်း: သိမ်းယူမှုဟာ dopaminergic ရန် haloperidol ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် accumbens ထိုးကြောင့်ထိခိုက်နေပါတယ်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1994;108: 927-934 ။ [PubMed]
36 ။ Ernst M က, et al ။ လူကြီးများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်အကျိုးအမြတ်လက်ခံရရှိခြင်းနှင့်ပျက်ကွက်မှတုံ့ပြန်မှုအတွက် Amygdala နှင့်နျူကလိယ accumbens ။ Neuroimage ။ 2005;25: 1279-1291 ။ [PubMed]
37 ။ သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, et al ။ orbitofrontal cortex မှဆွေမျိုးအဆိုပါ accumbens ၏အစောပိုင်းကဖှံ့ဖွိုးတိုးတမြီးကောင်ပေါက်အတွက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူအခြေခံလိမ့်မယ်။ J ကို neuroscience ။ 2006;26: 6885-6892 ။ [PubMed]
38 ။ et al Bjork JM ။ မြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာမက်လုံးပေး-ရူးနှမ်းဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်: အလားတူနှင့်လူငယ်လူကြီးများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားမှု။ J ကို neuroscience ။ 2004;24: 1793-1802 ။ [PubMed]
39 ။ Geier CF, Terwilliger R ကို, Teslovich T က, Velanova K သည်, Luna ခနုဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက်။ Cereb Cortex ။ 2010;20: 1613-1629 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
40 ။ Somerville LH, Casey BJ ။ သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ neurobiology ။ Curr Opin Neurobiol ။ 2010;20: 236-241 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
41 ။ Krishnan V ကို, Nestler EJ ။ ခံစားချက်မှမော်လီကျူးများချိတ်ဆက်: စိတ်ကျရောဂါ၏ဇီဝဗေဒသို့နယူးထိုးထွင်းသိမြင်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2010;167: 1305-1320 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
42 ။ et al Fineberg NA ။ တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှသည် endophenotypes ရန်, compulsive နှင့်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူတွေကိုစကားတွေ: တစ်ဦးကဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်။ Neuropsychopharmacology ။ 2010;35: 591-604 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
43 ။ Koob gf, Volkow ND ။ စွဲလမ်း၏ Neurocircuitry ။ Neuropsychopharmacology ။ 2010;35: 217-238 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
44 ။ Homayoun H ကို, Moghaddam ခ Orbitofrontal cortex အာရုံခံဂန္နှင့် glutamatergic antipsychotic မူးယစ်ဆေးဝါးများတစ်ဘုံပစ်မှတ်အဖြစ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2008;105: 18041-18046 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
45 ။ Sturman DA, ကထပ်လောင်း DR, Moghaddam ခပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းဆာပသင်ယူမှုနှင့်မျိုးသုဉ်းနေစဉ်အတွင်းလူကြီးများအနေဖြင့်အပြုအမူကွဲပြားခြားနားမှုပြ။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2010;124: 16-25 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]